[Akhriso:-] 7 sanno ka hor maanta Oo Kale, ayaa la bud dhigay jidka Ceerigaabo-Burco.
Wednesday 16th September 2020 11:40:49 in Wararkii Maanta by Tafatiraha Guud
Maanta oo kale 7 sanno ka hor, ayaa la dhagax dhigay mashruuc waddo kii ugu weynaa ee laga hir geliyo Somaliland, kaas oo ahaa jidka isku xidha Burco iyo Ceerigaabo oo ahaa mid ay bulshada Gobolka Sanaag dhibaato iyo rafaad badan kala kulmi jirtay.
Jidkan ayaa intiisii badanayd la dhamaystiray, iyada oo Xukuumaddii hore ee Kulmiye dhistay 94 KM, halka Xukuumadda uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi hir gelisay 101 KM oo ka mid ah jidkan, taas oo ka dhigaysa cabirka Jidka inta dhisan 195 KM.
Marka laga qiyaas qaato dhisan waxa hadhsan 70 KM in ku dhow.
Inkasta oo muddo 7 sanno ah uu soo jiitamay dhismaha jidkan, ayaa haddana dadka deegaanku ka faa'ideen isticmaalka inta la dhisay, iyada oo wakhtigii dheeraad, rafaadkii iyo dhibtii lagala kulmi jiray jidkan ay ka raysteen dadka Gobolka Sanaag, waxaanay isticmaali jireen gaadiidku kolba inta shisan amma caro kaawaha la dhigo.
Beel-waynta Gashaanbuur Ciidagale Oo Shirwayne Ay Qabsanayaan Shaciyay & Arrimaha Soo Kordhay [ Muuqaal ]